21 November 2010 – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
In the absence of the gracious Jasmine,
The humble Khan Pwint is woven into Royal wreaths.
But when the Jasmine reappears,
No longer can this lowly wildflower stay, but
Return she must
To her wild country home
In all the tales that were hard to swallow, what U Thar Kyaw was telling me was truly more unbelievable then most. But he said it was no fairy tale.
“It’s the truth, Khin Lay is still living, right in my own village”, he insisted.
The story he told was simple yet lovely. The time when he told me was in misty March, and it seemed perfect for the tale. When he described how at sunset the mist would rise over the fields I could see it as if painted on canvas.
He did not reveal the name of the village.
Poets sing of the moon’s silver rays but country girls see its light as pale gold. As the moon rose in the east it seemed as if the Moon Goddess had loosened her hair and let the strands sweep down softly to earth. It wasatime when moonbeams touched the paddy fields that U Thar Kyaw and his neighbouring farmers met Thakin1 Kyaw Zeya.
In the village, in the front yard of almost every house hasarack to grow gourd vines. The girls of the village would sit under this rack to gossip. A long time ago they used to spin, but now they no longer weave at home. The rays of the moon would seek out the girls through the thick foliage.
It was said that Thakin Kyaw Zeya met Khin Lay under this very gourd vine. He, too, like the moonbeams, had seen her as he made his way through the vines and trees of the village. Khin Lay’s parents were landowners but she seldom lived in the village, as she went to school in town and only returned occasionally. Her mother insisted that at home, she must live and behave likeacountry girl. So at every dew-soaked dawn she must cook the rice to offer at the household shrine and to the monks who making their alms rounds. She had to help her mother prepare lunch to take to the labourers working in their fields. At night, under the light of the moon, she had to husk peanuts. Her mother would give herahand and talk about their farm.
Her mother would tell her, “Wherever you go, please come back to us.”
Her mother always sounded uncertain whatever she said, as if she did not believe her own words. In fact, she always thought Khin Lay would abandon them and the farm and settle in town, and it was not an unreasonable fear. Everyone exclaimed at Khin Lay’s beauty and they would say that she was too pretty to be hidden in the country. Every time Mother heard this, she would adamantly shake her head.
“Now, what is this? She was born on the farm and why should she be too good for the farm? Don’t let my girl hear it, she is fragrant with the smell of our land.”
Khin Lay wanted to becomeateacher and that was the one reason she was sent to town to be educated. While she was sitting for the exam for the appointment ofaMiddle School teacher, she had met Thakin Kyaw Zeya, who had often been to their village, but only then met Khin Lay. Thakin Kyaw Zeya had come to organise the farmers so most of them knew him well. Campaigning with the farmers, he loved having green tea and fried peanuts. He loved the cool breeze that swept to him across the farms. He said he loved the simple and sweet fragrance of the wildflowers.
He whispered poetic words to Khin Lay under the gourd vines; and Mother did not like it, not one bit. But when U Thar Kyaw himself, who was likeason to her, said it wasafortunate meeting of the two young people, Mother could not protest. In her eyes the fact that Thakin Kyaw Zeya wore the rough Pinn2i cotton and the cotton longyi woven in Pakokku was testament enough that he was no stranger to the countryside. But she could not be quite sure; she felt uneasy. Whatever could the reason be for this?
Wild roses lined the dirt road leading out of the village on both sides. It was on this very road that Thakin Kyaw Zeya took away his bride Khin Lay from her home, onabullock cart. It was so early in the morning that the dew was falling thickly and one could hardly see anything. The winter of the countryside was chilly and crisp. Khin Lay sat close to Thakin Kyaw Zeya, huddling against the cold. The sweet smell of the wildflowers greeted her. She looked and looked in the mist to see if she could catchaglimpse of her mother’s house, but to no avail; the dew was falling too fast. She gave up and leaned against Thakin Kyaw Zeya, tears welling in her eyes.
Mother could not even sit to pray, as was usual for her at that time of dawn. She stood looking from the front door into the mist until she could no longer hear the cartwheels.
“I’ve never gone away from the village, so never been on that road,” she said to the maid watching with her. Now, since her daughter left, she did not even go near that road.
U Thar Kyaw paused when he reached the part in his story of Khin Lay leaving the village. Was he seeing again in his mind that country morning hidden under the mist? He did not say why he paused but when he picked up the story again, the scene had changed to one of spring.
He said, simply, that spring wasatime of both the old and the new. Aged and worn leaves drift to earth, leaves that had once fluttered green and fresh on the high branches, showing off their youth and beauty and they had breathed in the winds of high places.
“So now that they are old and worn, how ill is their Fate! Like old men sitting to meditate before they finally die, wouldn’t the leaves want to restabit? But no, the harsh and hot wind swept them away hither and thither. The old leaves looked up at the branches they had left, and new green leaves were already sunning themselves. A wild wind brought the smell of flowers from distant woods and reminded the fallen leaves of their life. If they had been human, they would surely weep. Was it not this same wild wind that swept over them last year as they, too, sunned themselves after they had burst forth in their youth, the same wind with the scent of paradise itself? Now, they are exhausted, skittering all over at the whim of the wind?
At this time of change, U Thar Kyaw said, the revolution had begun in their village3. He said that in the thick woods near their village, battles with the Japanese left some of his villagers dead: their blood still stained the land. U Thar Kyaw continued, “So that Thakin Kyaw Zeya could concentrate on his political work, his wife Khin Lay taught school to earn their living. She could not even come home. But then, just to help him with his work, she came back.”
Many times Khin Lay, with food inabasket on her head, walked out their village, past the big Kapok tree into the woods where Thakin Kyaw Zeya and U Thar Kyaw and others were hiding. Sometimes she sentavillager with the food.
She went so often, that the ground under the Kapok tree could well turn intoastream.
“Ask the Kapok tree and the earth under it if you want to know how much she helped her husband,” U Thar Kyaw said. Whatastrange thing to say! I stared at him.
“Ask the Kapok tree and the earth?”
“You see, men may lie; but the earth, never. It is alwaysawitness to changes under the Buddhist Law of Impermanence, isn’t that right?”
I searched U Thar Kyaw’s eyes. They were clear and bright and I continued to listen to his words without qualms.
He said that man’s change of heart and situation and man’s true nature were known well only by the earth. As the hot wind of March drove the old leaves away, so had their revolution scattered the cruelty of Japanese fascism to the winds. Blood from both sides fell to the earth and only the earth would know which blood was whose.
The footsteps of the freedom fighters were left all over the earth as they ran and fought, and if historians by chance left out the some faithful revolutionaries, the earth knew them all.
When peace was restored, the freedom fighters gained positions and honours. When some who had been hiding in fear stood up to declare that they too had fought with valour, the earth had laughed deeply.
When the monsoon begins the winds are no longer hot and harsh. They blew steadily and only from the south. The parched and hardened earth became damp and dark brown. One could smell the rain in the wind and sense the moisture. Flowers woke up, the trees became fresh and green under the raindrops. Is it not natural that the searing heat and violent changes of March should be followed by the compact coolness of the early rains? In this time of the beginning of monsoon Khin Lay for the second time had to follow her husband where he went. This time, it was to Yangon, the city. Although Khin Lay begged, her mother refused to go with them.
The early rainfall had pressed down the earth so the road was not dusty. The cartwheels sank into the softened earth. This time too, her mother watched from her door. The two cart tracks stretched out far into the distance,along, long way.
U Thar Kyaw and his comrades went along and said goodbye only when the cart passed into the woods where so many of their friends had fallen. This time too Khin Lay could not see the village as she looked back, not because of the mist but for the tears in her eyes.
The tall trees swayed as if saying goodbye to her; she waved at the profusion of wild flowers by the road, feeling sad to be leaving the village. When they passed under the Kapok tree she did not look up.
Letters came, instead of Khin Lay, to her mother. U Thar Kyaw had to read out the letters. When there were delays between letters, Mother would worry that her daughter had forgotten her.
In one letter Khin Lay described her life.
Before, I was too busy working asateacher so that he could concentrate on his politics, and now I am no longer the wife of freedom fighter Thakin, he is now an aid to the minister. But I am still busy, but this time in the kitchen, so I could not write to you often.
Just now while writing this I had to stop as he came back from his game of tennis and I had to make orange juice for him. He plays tennis everyday, to be fit.
I must tell you about the changes. The house where he plays tennis is Peggy’s house, he said. They were from the same town but when he was ‘Thakin’ Kyaw Zeya she hardly looked at him, because he was an agitator and he was poor. But now, the whole family is very friendly towards him, and I’m happy about that.”
U Thar Kyaw had stopped reading to glance at Khin Lay’s mother. She lookedabit confused. She asked him what ‘tennis’ and ‘Peggy’ meant and he had to explain.
U Thar Kyaw continued reading aloud:
“In the afternoons I had to take coffee and bread and butter to his office, so even during the day I don’t have much time for myself. I want to come and see you or send money but as he had many friends from his Thakin days to look after, we keep giving dinners and lunches very often so I’m tied up with work, and not much cash is left over.”
Her mother smiled at this. She was quite happy; it was the thought that mattered.
U Thar Kyaw wished out loud that he could see Thakin Kyaw Zeya again. It was four years since he and Khin Lay left. In the following months Khin Lay wrote more often.
“Nowadays I have more free time to write, he is seldom at home. He is probably playing more tennis; he comes home only at about ten or eleven at night.”
Her mother was happy to get frequent letters from Khin Lay. If her daughter came home foravisit, how happy she would be! But when the next letter came, she could not understand it. U Thar Kyaw’s voice trembled as he read. The letter, as always, started onaplaintive call for… comfort? Support? This “oh, my dear mother…
“Oh my dear Mother,
I write humbly to you. In early March I will come home. Please you and U Thar Kyaw wait for me on the road to the village.”
When she heard the words, Khin Lay’s mother was shaky with happiness.
“Really? My daughter? She’s coming home!”“This time, Mother, I will live with you always. I will never leave you or the farm again. But please don’t tell anyone.”
U Thar Kyaw stopped reading. Now what was this?
“Oh, dear mother, don’t feel sorry for me. Change isanatural part of life, you know that. It is only I who is wrong, I who thought something changeable was permanent.”
At this point, Mother grabbed U Thar Kyaw’s arm.
“What does she mean by that?” she asked. He shook his head slowly and continued to read.
“You know, my husband, he is going to marry Peggy tomorrow4. How can I remain here? He said I lack so many things, but he did not say what. I wanted to ask him so much, but I dared not. Maybe it isalack that I do not know what my faults are! You will remember I once told you about Peggy, how she never even looked at him when he wasapoor ‘Thakin’, the woman who looked down on him once. I will come back, mother. Be sure to come and meet me on the road.
May you be in good health and joy,
Your daughter Khin Lay”
U Thar Kyaw sat glumly with the letter in his hand. Mother however was smiling.
“She’s right to come home,” she said simply.
“That’s not right,” U Thar Kyaw had protested, “are they all of them discarding their past? After all, Khin Lay supported him, fed him, all through the fight for independence. He should at least have some consideration for that. How could they so easily forget their comrades?”
“Let’s not dwell on the past. My daughter said she was at fault: how happy I am that she is coming back! Men, when they loveawoman, could never see any fault with her even one as big asamountain, but when he no longer wants her, they would exaggerate an atom of fault into the size ofamountain. Please, Buddha, make her journey safe.”
She raised her two hands together to Buddha; she smiled but her eyes were full of tears.
The evening that Khin Lay was due to arrive, both her mother and U Thar Kyaw waited on the road outside the village. For the mother it was the first time she set foot here after her daughter left all these years ago.
Every time that the dark shape ofacart meandered out from the woods, Mother trembled in anticipation. From this road her daughter had left but from this road she would come home.
The setting sunlight had lost its heat and its pale gold was left only on the tips of the trees. In the underbrush and along the road, mist had begun to rise.
“This is where three of our villagers fell,” U Thar Kyaw said. The earth beneath the Kapok tree that he pointed out no longer bore any bloodstains.
The cart stopped under it and Khin Lay jumped down and walked slowly towards her mother. She held tight to her mother’s hands. Her mother could not sayaword.
“I’m home, Mother,” Khin Lay said simply.
Her mother clutched Khin Lay’s shoulder and looked into her face as if she were seeingastranger.
“Promise me you won’t go away again,” she finally said. Khin Lay nodded and tears fell from her cheeks onto the earth beneath the Kapok tree. They walked back into the village.
It is said, U Thar Kyaw told me, that at the place under the Kapok tree there now grewahuge bush of the Trodden Flower.
He did not however tell me if it grew out of Khin Lay’s tears or the villagers’ blood.
(Myawaddy Magazine, March 1955)
(The author picked this short story as her favourite inacollection by seven women writers titled “Creator’s Choice”.)
Translated by Ma Thanegi
1 “Thakin” means master. Nationalists rebelling against the colonial British used Thakin asaprefix to their names.
2 Rough, home spun unbleached cotton sewn into jackets. A symbol of not using foreign-made goods.
3 March 27th, Revolutionary Day.
4 By customary lawaBuddhist man may marry as many times as he wishes, if he could get permission from the first wife:atechnicality ignored by most.﻿
Republished on my blog with the kind permissions of Daw Mi Kyaw Thaung, one and only daughter of the late author Daw Khin Hnin Yu, and Daw Thanegi.
“တကယ်ဖြစ်တာဗျာ။ မခင်လေးဟာလည်း တကယ် ရှိနေပါတယ်။ ကျုပ်တို့ ယာတောမှာကို ရှိနေပါတယ်” ဟူ၍ဆို၏။ သူပြောသောပုံမှာ ရိုး၍ လှပသည်။ တပေါင်းလနှင့်လည်း လျော်ကန် သင့်မြတ်လှပေသည်။ သို့သော် ရွာ၏ အမည်ကိုမူ မဖော်ပေ။
နေခြည်ပျောက်ချိန်တွင် ယာတောပေါ်သို့ မြူမှုန်လေးများသမ်းလာပုံကို ပြောပြသောနေရာတွင် လွမ်းဆွတ်ဖွယ်ကောင်း၍ ပန်းချီဆန်လှပေသည်။
ကဗျာဆရာတို့က လရောင်ခြည်ကို ငွေရောင်ခြည်ဟု ဆိုသော်လည်း ယာတောသူတို့၏ မျက်လုံးတွင် ရွှေရောင်လို ဝါပြေပြေသာ မြင်တွေ့၍ နေရပေသည်။ အရှေ့မှလထွက်လာလျှင် လအိမ်စောင့်နတ်သမီး၏ ဆံပင်များ ပြေ၍ လျောကျလာသလို လရောင်ခြည်သည် ညွတ်ပျော့၍ မြေသို့ကျလာသည်။ လရောင်ခြည်နှင့် သိမ်းပြီးစ ယာခင်းပြင်တို့ တွေ့ထိသလို ဤလယ်ယာခင်းပြင်တို့တွင် ဦးသာကျော်တို့ ယာသမားတစ်စု သခင် ကျော်ဇေယျတို့ တွေ့ကြသည်ဟု ဆို၏။
ရွာထဲတွင်မူ အိမ်ရှေ့တိုင်းလိုလို၊ ဘူးစင်ရှိ၏။ ဘူးစင်များကြားသို့ လရောင်သည် လူးလွန့်၍ ဝင်လာတတ်၏။ ရွာပျိုချောတို့ကို လရောင်သည် တိုးဝင်၍ ရှာဖွေနေဟန် ရှိပေသည်။ ဤရွာရှိ အပျိုချောတို့ ဘူးစင်အောက်မှာ ညဉ့်တိုင်း ထိုင်နေတတ်သည်ဟုဆို၏။ ရှေးတုန်းကမူ ဤဘူးစင်အောက်တွင် ဗိုင်းငင်ကြသည်ဆိုသော်လည်း ယခုတော့ ဤရွာတွင် ဗိုင်းငင်သည်ကို မတွေ့ရသည်မှာ ကြာလှပေပြီ။
ဤဘူးစင်အောက်တွင် သခင်ကျော်ဇေယျနှင့် မခင်လေးတို့ တွေ့ကြသည်ဟုဆိုပြန်သည်။ သူသည် လရောင်ခြည်လိုပင် ဤယာတောသို့ တိုးဝှေ့ဝင်လာရင်း မခင်လေးကို တွေ့ရပေသည်။
ခင်လေးမိဘများသည် ယာခင်းရှင် ဖြစ်သော်လည်း ခင်လေးသည် ယာတောတွင် ကြာကြာမနေတတ်ပေ။ မြို့မှာ ကျောင်းနေသည်က များ၏။ သို့သော် အိမ်ကို ပြန်ရောက်တိုင်း အမေက ယာတောသူလို နေရမည်ဟု ပြော၏။
နှင်းမှုန်သိပ်သော နံနက်တွင် အစောကြီးထ၍ ဆွမ်းချက်၏။ ယာခင်းသို့ အလုပ်ဆင်းမည့်သူတို့အတွက် အမေနှင့် ထမင်းအတူချက်ပေးရသည်။
ညဉ့်တွင်လည်း လရောင်အောက်တွင် မြေပဲသီးများကို အခွံချွတ်၍ ပေးရ၏။ မြေပဲခွံ ချွတ်နေစဉ်တွင် အမေသည် သူ့ယာတောအကြောင်းကို ခဏခဏပြောပြ၏။
“ဘယ်ကိုပဲ ရောက်နေနေ အမေတို့ဆီတော့ ပြန်လာပါသမီးရယ်”
အမေသည် စကားပြောတိုင်း မယုံမရဲရှိတတ်၏။ အမှန်လည်း သူသည် ခင်လေးကို မယုံ။ ခင်လေးသည် ဤယာတောကို စွန့်ပစ်၍ မြို့သို့ဝင်သွားမည်ဟု အမေက ထင်၏။
ထင်လည်းထင်စရာပေပဲ လူတိုင်းလိုလိုက ခင်လေးသည် လှပသည်ဟု ဆို၏။ ဤအလှသည် ယာတောနှင့်မတန်ဟုလည်းဆိုကြသည်။ အမေကတော့ ထိုစကားများကို ကြားတိုင်း ခေါင်းတွင်တွင်ခါ၏။
“ခက်ပဲခက်ရချည့်ရဲ့။ ယာတောက ထွက်တဲ့ အလှဟာ ယာတောနဲ့ ဘာလို့ မတန်ရမှာလဲ။ မိန်းကလေး မကြားပါစေနဲ့။ မိန်းကလေးကိုယ်ဟာ ယာတော အနံ့ နံနေတယ်”ဟု အမေက ပြောတတ်သည်။
ခင်လေးက ဆရာမ ဖြစ်ချင်သည်ဆို၍သာ အမေက ကျောင်းထားပေးရသည်။ မြန်မာလို အလယ်တန်းပြဆရာဖြစ် ဖြေနေဆဲတွင် ခင်လေးသည် သခင်ကျော်ဇေယျနှင့် သိလာသည်။ သခင်ကျော်ဇေယျသည် သူတို့ရွာသို့ လာနေကျဖြစ်သည်မှာ ကြာပေသည်။ ခင်လေးနှင့်တော့ ယခုမှပင် တွေ့ဆုံကြပေသည်။
ခင်လေးတို့ရွာမှ ယာသမားများကို သခင်ကျော်ဇေယျက လာ၍ စည်းရုံးရသည် ဆိုသည်။ ယာသမားတိုင်းလိုလိုက သခင်ကျော်ဇေယျကို သိသည်။
ထိုစဉ်က ထိုစဉ်က သခင်ကျော်ဇေယျသည် မြေပဲကြော်နှင့် ရေနွေးကြမ်းကိုသာ နှစ်သက်ခဲ့ပေသည်။ ယာခင်းပြင်ပကို ကျော်ဖြတ်လာသော ယာတော၏ လေအေးကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ရှူရှိုက်ခဲ့ရ၏။ ချိုအေးသော တောပန်းရနံ့ရိုးရိုးကိုသာ သူ နှစ်သက်ပါသည်ဟုဆိုသည်။
အမှန်မှာမူ ဘူးစင်အောက်သည် ယာတောကို စာဖွဲ့ရာနေရာ ဖြစ်ပေသည်။ ဤဘူးစင်အောက်တွင် သခင်ကျော်ဇေယျနှင့် ခင်လေး တွေ့ဆုံခြင်းကို အမေကတော့ မနှစ်သက်ပေ။
သို့သော် ဦးသာကျော်ကိုယ်တိုင်က “ကောင်းသော တွေ့ခြင်း”ဆိုသည့်အတွက် အမေက မငြင်းဆန်ပေ။ ပင်နီဖျင်ကြမ်းအင်္ကျီနှင့် ပခုက္ကူလုံချည်တို့မှာ သခင် ကျော်ဇေယျသည် ဤယာတောတို့နှင့် မကင်းကွာလှကြောင်းကို ပြနေ၍ အမေက ကျေနပ်ရပေသည်။ သို့သော် အမေက စိတ်ထဲမှာ ထင့်နေ၏။
“ဘာကိုများ အမေ စိတ်ထင့်ရပါလိမ့်”
အမေတို့ရွာမှ ထွက်သော် လမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင် နှင်းဆီရိုင်းပင်များ အလေ့ကျပေါက်၍နေသည်။ ဤလမ်းလေးမှပင် သခင်ကျော်ဇေယျသည် ခင်လေးကို လှည်းနှင့် ခေါ်ဆောင်၍ လာသည်။ နံနက်အစောကြီး ထလာရ၍ နှင်းများမှာ လမ်းကို မမြင်နိုင်လောက်အောင် ပိတ်ဆို့၍နေသည်။ အညာဆောင်း၏ နံနက်ခင်းလေသည် အေးစက်၍ သွက်လက်လှသည်။ ခင်လေးက သခင် ကျော်ဇေယျဘေးတွင် ကပ်၍ ကွေးကွေးလေး ထိုင်ကာ လိုက်ပါလာသည်။ တောပန်းရနံ့ ချိုချိုလေးများသည် ခင်လေးကို နှုတ်ဆက်ကြ၏။ သူသည် အမေ့အိမ်ကလေးကို မြင်ရနိုးနှင့် လည်ဆန့်၍ကြည့်သည်။ သို့သော် နှင်းများ ပိတ်နေ၍ အမေ့အိမ်ကို မမြင်ရသည့်အခါဝယ် သခင်ကျော်ဇေယျဘေးတွင် ပု၍ ငြိမ်နေလိုက်သည်။ မျက်လုံးထဲတွင်မူ မျက်ရည်များက ဝိုင်း၍ နေပေသေးသည်။
အမေကတော့ ဘုရားပင် ဖြောင့်အောင် ရှိမခိုးနိုင်ပေ။ လှည်းသံပျောက်သည်အထိ နှင်းထုထဲသို့ မျှော်ကြည့်၏။
“အမေတော့ ရွာအပြင် ထွက်တဲ့ လမ်းကို ဘယ်တော့မှ မရောက်ဖူးဘူး”ဟု အမေသည် မိန်းမဖော်လေးကို ပြောပြနေသည်။ ယခုမူ ဤလမ်းဘေးမှ သမီး ထွက်သွား၍ အမေသည် ထိုတောလမ်းရှိရာသို့ ခြေဦးမျှပင် မလှည့်တော့ပေ။
ဦးသာကျော်သည် သူ့ပုံပြင်ကို ခင်လေး လိုက်သွားသည့်အခန်းတွင် ခဏ ရပ်၍ထား၏။ သူ့မျက်လုံးထဲတွင် နှင်းမှုန်များ ဖုံးအုပ်နေသော ယာတော၏ နံနက်ခင်းကိုပင် မြင်၍ နေလေသလား။ ဘာအကြောင်းကြောင့် ရပ်နေသည်ဟူ၍တော့ ဖွင့်ဟမပြောပေ။ နောက်တစ်ခန်းတွင်မူ တပေါင်း၏ ပန်းချီနှင့် ထိုပန်းချီကားအောက်တွင် လှုပ်ရှားမှုများအကြောင်း ဆက်၍ပြောပြန်သည်။
တပေါင်းသည် ဟောင်း၍ သစ်သောလ ဖြစ်၏ဟု သူက ရိုးရိုးပင် ဆိုပါသည်။ အိုမင်း ရင့်ရော်သော ရွက်ဟောင်းတို့သည် မကြာခင်ကပင် မြေသို့ လျောကျ သက်ဆင်း၍ လာကြသည်။ ရွက်အိုတို့သည် တစ်ခါကမူ အကိုင်းများထက်တွင် သူတို့၏ လှပ တင့်တယ် ပျိုမျစ်ခြင်းများကို လောကသားတို့အား ပြခဲ့လေသည်။ ကောင်းကင်လေသည်သာလျှင် သူတို့၏ ရှူရှိုက်ရာ ဖြစ်ခဲ့လေသည်။
“ယခုတော့လည်း အိုမင်း ရင့်ရော်လာပြီဆိုတော့ ဆိုးလိုက်သည့် ကံကြမ္မာပေပဲ။ မြေတွင် ခဏရပ်နား၍ အဘိုးအိုသည် တရားရိပ်တွင် ခိုအောင်းသလို ခဏတာတော့ မသေခင် နားလိုက်ချင်ပါရဲ့။”
သို့သော် ပူပြင်း၍ သွက်လက်သောလေက ရွက်အို ရွက်ဟောင်းများကို မောင်း၍ထုတ်၏။ အပင်အောက်တွင် အနားမရဘဲ လေမောင်းနှင်ရာသို့ ပြေးကြရပြန်သည်။
ရွက်ဟောင်းများသည် မြေတွင် ပြန့်ကြဲ၍ ဖရိုဖရဲ ပြေးလွှားကြရင်း သစ်ပင်များထက်သို့ မော်၍ ကြည့်၏။ အကိုင်းများပေါ်တွင် သစ်လွင်သော ရွက်နုများသည် ဝတ်လွှာ အစိမ်းနုများကို လွှမ်းခြုံ၍ နေရောင်တွင် လှပလေစွ။ တောတန်းဆီမှ တပေါင်းလေရူးသည် တောပန်းတို့၏ ရနံ့တို့ကို စုပေါင်းသယ်ယူလာ၏။ ရွက်ဟောင်းကြီးများသည် ငယ်စဉ်က သူတို့ဘဝကို ပြန်လည်အောက်မေ့မိသည်။ လူသားသာဆိုလျှင်လည်း မျက်ရည် တောက်တောက်ယိုလိုက်ပါ၏။ သူတို့လောကကို ထွက်ပြူစတုန်းကလည်း သည်လိုပင် တပေါင်းလ မဟုတ်ပါလော။ ပျိုမျစ် သစ်လွင်သောအရွယ်တွင် နေရောင်ခြည်ကို လှုံ၍ တောပန်းရနံ့တို့ ပြွမ်းသော ကောင်းကင်ပြင်ကို ရှူရှိုက်ရသည်မှာ ဘဝနိဗ္ဗာန်ပေတည်း။ ယခုတော့ လေတိုက်လိုက်တိုင်း ပြေးလွှားရသည်မှာ မောလှပါတကား။
ဤသို့ အဟောင်းများ ကြွေလျော့၍ အသစ်တို့ မွေးဖွားချိန်ဝယ် ဦးသာကျော်တို့ရွာတွင် တော်လှန်ရေးသည်လည်း ပေါက်ဖွားလာခဲ့သည်ဟု ဆို၏။ တောတန်းနှင့် မဝေးသော ဤရွာပြင်လမ်းအနီးတွင် ဂျပန်ကိုတိုက်ရင်း ကျဆုံးသွားသော ရဲဘော် ရွာသားများ၏ သွေးကွက်များလည်း ရှိသည်ဟူ၍ ဦးသာကျော်က ဆိုပြန်သည်။
“သခင့်မိန်းမဘဝတုန်းက သူ့ယောက်ျား နိုင်ငံရေးကို လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ခင်လေးဟာ ကျောင်းဆရာမလေး လုပ်ရတယ်။ အမေ့ရွာကိုတောင် ပြန်မလာနိုင်ဘူး။ ခုတော့ တော်လှန်ရေးအတွက် သူ့ယောက်ျားကို ကူညီဖို့ ရွာကို ခင်လေး ပြန်လာခဲ့ပါတယ်”
ဤနေရာတွင်လည်း ဦးသာကျော်သည် သူ၏ ပုံပြင်ကို ခပ်ဆန်းဆန်း ပြော၍ပြပြန်၏။
ရွာအပြန်လမ်းဘေးရှိ လက်ပံပင်ကြီးအောက်မှာ ထမင်းတောင်းကို ရွက်ကာ ခင်လေးသည် သခင်ကျော်ဇေယျနှင့် သူတို့ရှိရာ တောအုပ်ငယ်အတွင်းသို့ လာရသည်ဟု ဆို၏။
“တစ်ခါတစ်ခါတော့လည်း တခြားရွာသားတွေကို ပို့ခိုင်းတယ်”
လက်ပံပင်ကြီးအောက်တွင် ခင်လေးခြေရာများသည် ချောင်းဖြစ်လုအောင် ခေါက်တုံ့လူးလာခဲ့ပေသည်။ ရွက်ဝါကြွေများသည်လည်း နေရောင်ကြောင့် သွေ့ခြောက်ရသည့်အထဲတွင် ခင်လေး၏ ခြေထောက်အောက်တွင် ကြေမွပျက် စီးလာရပြန်သည်။
“သခင်ကျော်ဇေယျကို ခင်လေး ဘယ်လို ကူညီခဲ့တယ်ဆိုတာ အမှန်အတိုင်း သိချင်ရင် အဲဒီလက်ပံပင်ကြီးနဲ့ မြေကြီးကို မေးကြည့်ပါလား”
အလို… ကျွန်မသည် ဦးသာကျော်စကားကို အံ့ဩရပြန်သည်။
“ဟုတ်ပါတယ်။ လူဆိုတာတွေက အမှန်ကို ပြောခဲပါတယ်။ မြေကြီးကတော့ မလိမ်ပါဘူး။ သင်္ခါရတွေနဲ့ ဖောက်ပြန် ပြောင်းလဲနေတဲ့ အကြောင်းတွေကို အစဉ် စောင့်ကြည့်နေတာ မဟုတ်လား”
ကျွန်မသည် ဦးသာကျော်၏ မျက်လုံးများကို စိုက်၍ ကြည့်မိပြန်သည်။ သူ့မျက်လုံးများသည် ကောင်းမွန်စွာ တောက်ပနေ၍ သူ့စကားကို သံသယ ကင်းရှင်းစွာ ဆက်၍ နားထောင်နေလိုက်ပါသည်။
လူသားများ၏ ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုကိုလည်းကောင်း၊ အဖြစ်မှန် စိတ်ရင်းကိုလည်းကောင်း မြေကြီးသာလျှင် အသိဆုံး ဆို၏။ ရွက်ဟောင်းများကို တပေါင်းလေပူသည် မောင်းနှင် ရှင်းပစ်သလို တော်လှန်ရေးသည် ဖက်ဆစ်၏ ဟောင်းနွမ်းဆိုးယုတ်မှုများကို အပြင်အထန် တိုက်ထုတ်၍ ပစ်လေသည်။
ထိုသောအခါ ဖက်ဆစ်သွေးသည်လည်း မြေသို့ကျ၏။ တော်လှန်ရေးသမားများ၏ သွေးသည်လည်း မြေသို့ကျ၏။ သို့သော် ဘယ်သွေးစက်များသည် ဖက်ဆစ်၏ သွေး၊ ဘယ်သွေးကွက်များသည် တော်လှန်သူတို့၏ သွေးဟူ၍ မြေကြီးသည်သာလျှင် ပို၍ သိသည်ဟု ဆိုပါသည်။
တော်လှန်သူတို့သည် ပြေးလွှားကာ တိုက်ခိုက်ရင်း သူတို့ခြေရာများသည်လည်း မြေပေါ်တွင် နစ်၍ နစ်၍ ကျန်ရစ်၏။ တစ်ခါတစ်ရံ ပမာဓလေခ ချွတ်ယွင်း၍ မှတ်တမ်းတင်သူတို့က တော်လှန်သူအစစ် အချို့တို့အား မှတ်တမ်းတွင် မတင်ရစ်မိသော်လည်း မြေကြီးကမူ ဘယ်သူသည် တော်လှန်သူအစစ်ဆိုသည်ကို သိသည်ဟု ဆိုလေသည်။
တော်လှန်ရေးပြီး၍ အေးချမ်းသောအချိန်တွင် တော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်သူတို့အား အခွင့်အရေးပေးခဲ့၏။ ဤအချိန်တွင်လည်း ရောင်တော်ပြန်တို့က “သူတို့သည် ဖက်ဆစ်ကို တော်လှန်ခဲ့ပါသည်”ဟု လက်သီး လက်မောင်းတန်းကာ အခွင့်အရေးဆိုကြလေသည်။ ထိုအခါ မြေကြီးသည် ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်၏။ မြေသားသည် ပုထုဇဉ်မျှသာတည်း။
မိုးရာသီ စ၍လာလျှင် လေသည် လေပူလေရမ်းများ မဟုတ်တော့ပေ။ တောင်ဘက်မှသာ တိုက်ခတ်၍လာလေသည်။
အက်ကွဲ၍ မာကျောသော မြေတို့သည်လည်း စိုထိုင်း၍ ညိုလာ၏။ ရေတွင်လည်း မိုးစက်နှင့် မြေငွေ့တို့ ပါ၍ လာလေသည်။
ပန်းပွင့်တို့သည်လည်း အိပ်ရာမှ နိုးကုန်ကြကုန်၏။ သစ်ပင်အားလုံးသည် မိုးစက်အောက်တွင် စိမ်းလန်းလာကြလေသည်။ တပေါင်း၏ ပူပြင်းခြင်းနှင့် ပြင်းထန်စွာ ပြောင်းလဲခြင်း၏ နောက်ပိုင်းတွင် မိုးဦးကဲ့သို့ သိပ်သည်း၍ အေးချမ်းသော ဥတုလာရသည်မှာ ဓမ္မတာပေတည်း။
ဤသို့မိုး၏အစတွင် ခင်လေးသည် ဒုတိယအကြိမ် သခင်ကျော်ဇေယျထံသို့ လိုက်ဖို့ ပြင်ရပြန်သည်။
ယခုတစ်ခါသွားရသည်မှာ ရန်ကုန်သို့ ရောက်မည်ဖြစ်၍ အမေ့ကို ခေါ်သော်လည်း အမေက မလိုက်ပေ။
မိုးဦးကျစဖြစ်၍ ရွာလမ်းသည် ဖုန်မထူတော့ပေ။ လှည်းဘီးသည် မြေအိအိပေါ်တွင် နစ်၍ နစ်၍ သွား၏။ အမေသည် အိမ်ဝမှာပင် မျက်စိတစ်ဆုံး မျှော်၍ ကြည့်၏။ လှည်းလမ်းကြောင်း နှစ်ခုသည် အမေ့ရှေ့မှ ရှည်၍ ရှည်၍ ထွက်သွားကြသည်။
ဦးသာကျော်တို့ လူစုကတော့ သခင်ကျော်ဇေယျတို့အား ရွာသားတို့ ကျဆုံးသော တောတန်းလေးနားအထိ လိုက်၍ပို့၏။
ပထမတစ်ခါ ထွက်ခွာစက နှင်းဖုံးနေ၍ ရွာကို မမြင်ရပေ။ ယခုတစ်ခါမူ မျက်ရည်ဖုံးနေ၍ ခင်လေးသည် ရွာကို မျှော်ကြည့်သော်လည်း မမြင်ရပေ။ တောတန်းမှာတော့ မိုးရေကြောင့် သစ်ရွက်များ စိမ်းလန်းလာကြ၏။
ချိုသော ပိတောက်တို့၏ ရနံ့တို့သည်လည်း တောတန်းတစ်လျှောက်တွင် လှိုင်နေပေသည်။ အားလုံးသော သဘာဝသည် မိုးတစ်ဖြိုက်ရွာအပြီးတွင် ပြန်လည် သစ်ဆန်းလာသလို ရွှင်လန်း၍ နေပေသည်။
“အားလုံးကတော့ သစ်နေသလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် လေက စိုထိုင်းထိုင်းကြီး အစ်ကိုရယ်”ဟု ခင်လေးက ပြောလိုက်သည်။
“အေးပေါ့။ ဘယ် အားလုံးတော့ ပြောင်းလဲမလဲကွယ်၊ တစ်ခုခုတော့ စိုထိုင်းထိုင်း ဖြစ်နေဦးမှာပေါ့”
အားလုံးသော သစ်ပင်လေးများက ထိုးထိုးထောင်ထောင် လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနှင့် သူ့ကို နှုတ်ဆက်၏။ မိချောင်းနွယ်ပန်းများကလည်း ဖွေး၍နေပေသည်။ သူသည် လက်ကို ဝှေ့ယမ်းကာ ပန်းကလေးများကို နှုတ်ဆက်လိုက်လေသည်။ ယခုလို အသိုင်းအဝိုင်းများမှ ခွဲထွက်သွားရတော့လည်း ဝမ်းနည်းသလိုလို ဖြစ်လိုက်မိသည်။ မြင့်သောလက်ပံပင်ကြီးကို ဖြတ်ကျော်အသွားတွင်မူ သူသည် မော့၍မကြည့်တော့ပေ။
ခင်လေး ထွက်ခွာသွားပြီးမှ သူ့ကိုယ်စား အမေ့ထံသို့ စာများ လာခဲ့လေသည်။ ဦးသာကျော်က ခင်လေးထံမှ စာလာတိုင်း အမေ့ကို ဖတ်ပြရ၏။ စာများ လာသည်မှာ တစ်စောင်နှင့် တစ်စောင် ဝေးကွာလွန်း၍ အမေသည် သူ့ကိုများ သမီးလေးက မေ့သွားပြီလားဟု ထင်သည်။
စာတစ်စောင်တွင်မူ သူ့ဘဝကို ခင်လေးက ဖော်ပြလိုက်၏။
ဟိုတုန်းကတော့လည်း သူ နိုင်ငံရေး လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် လုပ်နိုင်အောင်လို့ ဆရာမ လုပ်နေရတာနဲ့ မအားရဘူး။ အခုတော့ အမေ့သမီးဟာ သခင့်မိန်းမ မဟုတ်တော့ဘူး။ အစ်ကိုတစ်ယောက် ပါလီမန် အတွင်းဝန် ဖြစ်သွားပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း မီးဖိုချောင်ထဲက မထွက်ရလို့ အမေ့ဆီ စာမရေးနိုင်ဘူး အမေရယ်။
သည်စာရေးနေတုန်းလေ အစ်ကို တင်းနစ်ရိုက်က ပြန်လာလို့ သမီး လိမ္မော်ရည်ဖျော်ပေးရဦးမယ်။ အစ်ကိုလေ အခု ကျန်းမာရေးအတွက် နေ့တိုင်း နေ့တိုင်း တင်းနစ်ရိုက်တယ်။
ပြောင်းလဲတာတွေကို အမေ့ကို ပြောရဦးမယ်။ အခု အစ်ကို တင်းနစ် သွားရိုက်တဲ့ အိမ်ဟာလေ ပဂ္ဂီတို့အိမ် အမေရဲ့။ အစ်ကို ပြောတယ်။ ပဂ္ဂီတို့ဟာ အစ်ကိုနဲ့ တစ်မြို့ထဲ သူငယ်ချင်းတဲ့။ ဒါပေမယ့် အစ်ကိုသခင်ကျော်ဇေယျဘဝတုန်းကဆိုရင် လှည့်လို့တောင် မကြည့်ဘူးတဲ့။ အစ်ကိုတို့ဟာ လူရှုပ်တွေ၊ သခင်ဆင်းရဲတွေဆိုပြီး အစ်ကိုတို့ကို အဖက်မလုပ်ဘူးတဲ့။ အခုတော့ အစ်ကိုတို့ကို သူတို့အားလုံး ခင်မင်ကြပါတယ်လေ။ ဒါကြောင့် သမီးလည်း ဝမ်းသာပါတယ် အမေရယ်။
ဦးသာကျော်သည် စာကို ခဏ ရပ်နား၍ အမေ့ကို လှည့်ကြည့်လိုက်၏။ အမေ့မျက်လုံးတွင် တစ်စုံတစ်ခု နားမလည်သလို ဟန်ပေါက်နေသည်။
ဦးသာကျော်သည် စာဖတ်စဉ် အမေက “တင်းနစ်”နှင့် “ပဂ္ဂီ”ဆိုသည်မှာ ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်ရှိသည့်အကြောင်း ဦးသာကျော်ကို မေး၍ကြည့်ရ၏။ စာကို ဆက်ဖတ်ပြန်သည်။
“နေ့လယ်ဆိုလည်း အမေရယ် ပေါင်မုန့် ထောပတ်သုတ်နဲ့ ကာဖီကို အစ်ကို့ဆီ ပို့ရတော့ နေ့ခင်းမှာလည်း မအားနိုင်ဘူး။ အမေ့ဆီကိုလာလည်း လာချင်တယ်။ ငွေလည်း ပို့ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သခင်က ဖြစ်လာတဲ့ အတွင်းဝန်ဆိုတော့ ကျွေးရ၊ မွေးရတာနဲ့ မနားရဘူး အမေ။ ငွေကလည်း ပိုလှတယ် မရှိဘူး”
အမေက စာဖတ်ရင်း ပြုံး၏။ သမီးသည် သူ့ကို ဒါလောက် သတိရလျှင်ပဲ ကျေနပ်ပါပြီ။
ဦးသာကျော်ကတော့ သခင်ကျော်ဇေယျ သူတို့ဆီ တစ်ခေါက်တလေ လာစေချင်သည့်အကြောင်း ပြော၍နေသည်။ သခင်ကျော်ဇေယျ မလာသည်မှာ သွားကတည်းက ယခုအထိဆိုလျှင် လေးနှစ်တိတိ ရှိသွားပေပြီ။ နောက်လများတွင် ခင်လေးထံမှ စာများ ခဏ ခဏ ရောက်သည်။
“အမေရယ် ခုတစ်လောတော့ အလုပ်အားတာနဲ့ စာ ခဏ ခဏ ရေးနိုင်တယ်။ အစ်ကိုက အိမ်မှာ သိပ်မရှိတော့ အလုပ်အားတာပေါ့ အမေရဲ့။ သူ တင်းနစ် ပိုရိုက်တယ် ထင်ပါရဲ့။ ညဆယ်နာရီ ဆယ့်တစ်နာရီလောက်မှပဲ အိမ်ကိုပြန်လာတယ်”
အမေသည် ယခုတလော သမီးထံမှ စာ ခဏ ခဏ လာ၍ ပျော်၏။ သမီးလေးများ ကိုယ်တိုင်လာလျှင် ဘယ်လောက်များ ပျော်လိုက်မည်နည်း။ နောက်တစ်ခါ ရောက်လာသော စာကို အမေက ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ် ကောက်ရမှန်း မသိပေ။ ဦးသာကျော်ကတော့ အသံတုန်နေသည်။ ခင်လေးက စာရေးတိုင်း အစချီပုံကိုက “အမေရယ်”ဟူ၍ တိုင်တည်သံလိုလို၊ အားကိုးသံလိုလို စ၍ စ၍ ရေးတတ်သည်။ ယခုစာကလည်း အမေ့ကို တိုင်တည်သံပေလား။
သမီးရိုသေစွာ စာရေးလိုက်ပါတယ်။ တပေါင်းလဆန်းရင် အမေ့ဆီကို သမီးပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ အမေနဲ့ ဦးသာကျော် ရွာပြင်လမ်းက လာပြီး ကြိုနေပါ။
“ဟယ်… အမလေး သမီးလေး ပြန်လာမယ်”
အမေက ထိုစာပိုဒ်ကို ကြားရချိန်တွင် ပျော်လွန်း၍ အသားများ ဆတ်ဆတ် တုန်နေသည်။
သမီးလေ သည်တစ်ခါ အမေနဲ့ အတူနေသွားတော့မယ်။ အမေကိုရော ယာတောကိုရော သမီး ဘယ်တော့မှ မခွဲဘူး။ သမီး ပြန်လာမယ့်အကြောင်းကိုလည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောနဲ့နော်။
ဦးသာကျော်ကမူ စာကို ခဏ ရပ်ထား၏။ ဤစာ၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ ဘယ်လိုများပါလိမ့်။
အမေရယ် ဝမ်းမနည်းနဲ့နော်။ အပြောင်းအလဲဆိုတာ လောကရဲ့ဓမ္မတာ ဆိုတာ အမေ သိပြီးသားပါပဲ။ ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ သဘောကို ထာဝရတရားအဖြစ် ယူဆထားတဲ့ သမီးစိတ်ကသာ မှားတာပါအမေ။
ဤနေရာတွင် အမေက ဦးသာကျော်လက်ကို ခဏ ဖမ်းကိုင်၍ ထားလိုက်ကာ “သူ ဘာကို ရေးနေတာလဲကွ”ဟု မေးပြန်သည်။ ဦးသာကျော်သည် ခေါင်းကို ဖြည်းဖြည်း ခါလိုက်ကာ ဆက်၍ ဖတ်ပြန်သည်။
အစ်ကိုလေ သိလား။ အစ်ကိုရယ် ပဂ္ဂီနဲ့ မနက်ဖြန် လက်ထပ်ကြတော့မယ်။ သမီး သည်မှာ ဘယ်လိုနေလို့ ဖြစ်မလဲ။ သမီးမှာ အပြစ်တွေ အများကြီး ရှိတယ်လို့ အစ်ကိုက ပြောတယ်။ ဘယ်လို အပြစ်တွေ ရှိသလဲလို့ သမီး သိချင်လိုက်တာ။ အစ်ကို့ကို မမေးရဲလို့ မမေးတော့ဘူး အမေ။ ကိုယ့်အပြစ်ကိုယ် မသိတာကိုက သမီးရဲ့အပြစ်ပဲ ထင်ပါရဲ့။ အဲဒီ ပဂ္ဂီဆိုတာလေ အမေ မှတ်မိမှာပေါ့။ တစ်ခါက အစ်ကိုပြောတဲ့ “တို့များ သခင်ဘဝတုန်းကဆိုရင် တို့ကို လှည့်မကြည့်ဘူး။ သခင်စုတ်၊ သခင်ဆင်းရဲတွေဆိုပြီး နှာခေါင်းရှုံ့တယ်”ဆိုတဲ့ မိန်းမပေါ့အမေ။
ဦးသာကျော်က စာရွက်ကိုကိုင်ကာ ငိုင်နေသည်။ အမေကတော့ ပြုံး၍ နေ၏။
“သမီး ပြန်လာတာဟာ မှန်တာပေါ့ မောင်သာကျော်”ဟု ဆို၏။
“မဟုတ်ပါဘူး အမေရယ် တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုပဲ။ သူတို့အဟောင်းကို အားလုံးများ စွန့်ပစ်ကြပြီလား။ တကယ်ဆို ခင်လေးဟာ သခင်ဘဝတုန်းက ဒုက္ခ အတူခံပြီး လုပ်ကျွေးခဲ့တာတွေ၊ တော်လှန်ရေးတုန်းက ကူညီခဲ့တာတွေကိုတော့ ထောက်ဖို့ကောင်းပါသေးတယ်။ သူတို့ဟာ လုပ်ဖော်လုပ်ဖက်တွေကို မေ့ရက်လိုက်တာ”
“အို… ဒါတွေ ဘာမှ မပြောပါနဲ့ကွယ်။ သမီးလေးမှာ အပြစ်ရှိတယ်တဲ့။ သည်အပြစ်ကို ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ သမီးလေး ပြန်လာတော့မယ်။ ယောက်ျားဆိုတာက သူတို့မြတ်နိုးလာရင် အပြစ် တောင်လို ပုံနေပေမယ့် မမြင်ဘူးကွဲ့။ မုန်းလာပြီဆိုရင် မြူမှုန်လောက်ကို မြင်းမိုရ်တောင်လို အကျယ်ချဲ့တာပဲ။ ဘုရားမလို့ သမီးလေး ချောချောမောမော ပြန်ရောက်ပါစေ”
အမေသည် လက်နှစ်ဖက်ယှက်ကာ ဘုရားကိုလည်း တ၏။ ပါးစပ်မှလည်း ပြုံးသည်။ မျက်ရည်များလည်း လည်၍နေသည်။
ခင်လေး ပြန်ရောက်မည့် ညနေစောင်းတွင် အမေနှင့် ဦးသာကျော်လည်း ရွာပြင်လမ်းတွင် စောင့်၍နေသည်။ ဘယ်တုန်းကမျှ ရွာပြင်လမ်းသို့ မထွက်သော အမေသည် ယခုတစ်ခါ ပထမဆုံး ရောက်လာခြင်း ဖြစ်၏။
တောတန်း တစ်ထောင့်မှ လှည်းရိပ်မည်းမည်း ထွက်လာလျှင် အမေ့ ရင်များသည် တဆတ်ဆတ် ခုန်၍ လာသည်။ ဤလမ်းမှပင် သမီးလေး ထွက်သွား၍ ဤလမ်းမှပင် ပြန်လာခဲ့သည်။ နေရောင်သည် အပူရှိန် လျော့၍ ရွှေရောင်ဖျော့ဖျော့လေးသာ တောတန်း သစ်ပင်ထိပ်များပေါ်တွင် တင်နေရစ်သည်။ ချုံတန်းများ၏ အောက်ခြေတွင်တော့ မြူများ ဆိုင်းစပြုလာသည်။
“သည်နေရာမှာပေါ့အမေ၊ ရွာသားသုံးယောက် ကျတာ”ဟု ဦးသာကျော် က ပြော၏။ သူ ညွှန်ပြသော လက်ပံပင်ကြီးအောက်တွင်တော့ သွေးစက်များ မရှိတော့ပေ။ လှည်းသည် သူတို့အနား ရောက်လာ၍ လက်ပံပင်အောက်တွင် ရပ်လိုက်၏။
ခင်လေးသည် လှည်းနောက်မြီးမှ ခုန်ဆင်း၍ အမေ့ဆီကို ဖြည်းဖြည်း လျှောက်လာသည်။ အမေ့လက်များကို သူက တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဆုပ်ထားသည်။ အမေသည် စကားတစ်လုံးမျှ မပြောနိုင်ပေ။
“သမီး ပြန်လာပြီ အမေ”
တစ်ခါမျှ မတွေ့ဘူးသည့် လူတစ်ယောက်ကို ကြည့်သလို အမေသည် ခင်လေး၏ ပခုံးကို ကိုင်၍ မျက်နှာကို စေ့စေ့ကြည့်၏။
“နောက်တစ်ခါ ပြန်မသွားနဲ့နော် သမီး”
ခင်လေးသည် ခေါင်းကို ဖြည်းဖြည်း ညိတ်လိုက်၏။ သူ့မျက်လုံးမှ မျက်ရည်များသည် မြေပေါ်သို့ ခုန်၍ ကျသွားသည်။ ဤမြေကွက်မှာ ရွာသားတို့ ကျဆုံးစဉ်က သွေးစွန်းခဲ့သောနေရာ ဖြစ်သည်။
ရွာသို့ အဝင်လမ်းအတိုင်း လျှောက်၍လာကြသည်။
ဤမျက်ရည်စက်များ ကျသောနေရာတွင် ယခုအခါ ခံပန်းပင်ချုံတို့သည် အစုလိုက် ပေါက်နေသည်ဟု ဆို၏။
သို့သော် ထိုခံပွင့်များသည် ခင်လေး၏ အသည်းနှလုံးကို ကိုယ်စားပြုလေသလော၊ ကျဆုံးသွားရရှာသော ရဲဘော်တို့၏ သွေးစက်ကိုပင် ကိုယ်စား ပြုလေသလောဆိုသည်ကို ဦးသာကျော်က ဖွင့်ဟ၍ ပြောမသွားပေ။
(ဤ၀တ္ထုတွင်ပါရှိသော သခင်ကျော်ဇေယျမှာ သခင်ကျော်ဇေယျနှင့် လုံးဝ မပတ်သက်ပါ။)
(၁၉၅၅၊ မတ်လထုတ် မြ၀တီ မဂ္ဂဇင်းတွင် ရှေးဦးစွာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီး စာရေးသူ ခုနစ်ဦး၏ “ဖန်တီးသူအကြိုက်” ၀တ္ထုတို ပေါင်းချုပ်စာအုပ်အတွက် ဆရာမကြီး (ဒေါ်)ခင်နှင်းယု ကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ပေးခဲ့သော ၀တ္ထုတိုလည်း ဖြစ်သည်။)
(လက်တွဲဖော် စာအုပ်တိုက်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်ဘာသာနှင့် ထုတ်ဝေသော ခင်နှင်းယုရဲ့ ရင်မှပွင့်သော Stories from her heart စာအုပ်)
ဤစာမူကို ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်နှင်းယု၏သမီး ဒေါ်မိကျော်သောင်း၏ စာဖြင့် ရေးသားထားသော တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကျွန်တော့် ဘလော့(ဂ်)ပေါ်တွင် ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Author lettwebawPosted on 21 November 2010 22 November 2010 Categories Reproduction, Short Story3 Comments on Trodden Flower by Khin Hnin Yu